AVCHD in MKV - Sida loo Beddelaan AVCHD in MKV la AVCHD in MKV Converter
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan AVCHD in MKV ee Mac / Windows
Waxaan dhawaan lagu toogtay qaar ka mid ah video clips (qaab file AVCHD) la Sony HDR-XR200V fiidiyo. File AVCHD waa siman on Cam laakiin waxaan ka cabsanaa qaabka ma aha sida fudud loo heli karo meelo kale ee Cam ah. Sidaas daraaddeed waxaan doonayaa in aan badalo AVCHD in ay MKV ama qaab kale oo video ku badan Raaxo fiican. Sida loo sameeyo?
Haddii aad isticmaasho qalabka taagan oo keliya ah sida HTPC ah, Mischeif Saacadda ama ciyaaryahan Western Digital, ilaa aad ka qabto waafaqsan fiican weel MKV ah. Halkan waxaan jeclaan lahaa in aad ku talinaynaa in ay isku dayaan in ay AVCHD MKV Video Converter for Windows ama AVCHD in MKV Video Converter u Mac (Mountain Libaaxa, Libaaxa ka mid ah). The sahayda software laba kubad xawaare diinta si degdeg ah oo tayo sare leh, taas oo awood kuu dhammayn aad diinta, wax dhib ah maleh ee Windows ama Mac sidii si fudud oo dhaqso badan ee suurtogalka ah.
Halkan waxa aad ku muujinayaa sida ay u badalaan AVCHD in MKV in tallaabo Windows talaabo. Oo haddii aad qeybiso badalo AVCHD in MKX ee Mac socda Mac OS X Snow Leopard, Mountain Libaaxa, Libaaxa iwm, waxaad tagi kartaa Hagaha of Video Converter u Mac .
Sida loo badalo AVCHD in MKV in Windows?
Waxaa jira laba kaliya tallaabooyin si aad u tago. Just raacaan sida hoos ku qoran:
Tallaabada 1. Ku dar videos AVCHD in AVCHD in ay Converter MKV
Ku rakib oo ay maamulaan AVCHD ee barnaamijka MKV. Ku dar AVCHD videos aad adigoo gujinaya ah "Add Files" button image, ama si toos ah jiidi & daadiyaa. Waxaad ku dari kartaa wax ka badan hal file waqti. Tani AVCHD in Converter MKV kuu oggolaanayaa in aad samayn diinta Dufcaddii.
Tallaabada 2. Habee qaab wax soo saarka iyo badalo
Calan qaab wax soo saarka sida MKV ee files aad rabto in aad si loogu badalo. Waa mid aad u fudud. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inay riix "Qaabka Output" button dhinaca midigta, taas oo horseedaysa ah "Qaabka Output" window. In ka "Qaabka Output" window, dooro "Qaabka"> "Video"> "MKV". Taasi waa. Hit ah "Beddelaan" si ay u bilaabaan qaab beddelidda, iyo waxaad ka heli kartaa faylasha final muddo ka dib (Waqtiga diinta ku xiran tahay tirada files aad diinta).
Waxa kale oo aad dooran kartaa qaabab kale oo ka qaybta qaabka ay u buuxiyaan baahida kale. Waxa kale oo aad edit karaa videos AVCHD arrintan ka AVCHD in MKV Video Converter hor diinta ay lafdheerta, falinjeeerka, isagoo intaa ku daray saamayn, watermark iyo Cinwaan.